ညဘက်ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ Night Mode ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ?
Home News ညဘက်ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ Night Mode ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ?
ညဘက်အလင်းရောင်လုံလုံလောက်လောက်မရနိုင်တဲ့ အချိန်တွေဆို ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ ပုံတစ်ခုရဖို့ ဆိုတာ သိပ်ပြီး မလွယ်ကူလှပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ် စမတ်ဖုန်းတွေမှာတော့ Night Mode လို့ ခေါ်တဲ့ ညဘက် အလင်းမှိန်တဲ့နေရာတွေမှာပါ သေသပ်ထင်ရှားတဲ့ပုံမျိုးရအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ supportive mode တွေပါဝင်လာပါပြီ ။
အခုခေတ် စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ Vivo V Series products ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vivo V15 pro ဟာဆိုရင် Triple Camera Setup နဲ့အတူ Night Mode ကြောင့် photography ၀ါသနာ ပါတဲ့သူတွေကြားမှာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူထားပါတယ်။ အခြားဖုန်းကင်မရာတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Dual camera အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ 8MP+5MP+8MP ပါဝင်တဲ့ Triple Camera Setup ပါဝင်နေခြင်းက ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ သာမာန်ထက်ပိုမိုကျယ်ဝန်းတဲ့ရှုထောင့်တွေကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Night Mode နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ Night shots တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Camera Setup တွေထဲမှာ 48MP+5MP အပြင် extra 8MP wide-lens ပါဝင်နေမှုက Panorama ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာ အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ခုခေတ်ဖုန်းတော်တော်များများမှာ Panorama mode ပါဝင်ပေမဲ့လို့ wide-angle lens မပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် stable ဖြစ်အောင် camera ကိုမထိန်းနိုင်ရင် သေသပ်တဲ့ပုံတစ်ခုရဖို့ ဆိုတာမလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။
ညဘက်ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ ရတတ်တဲ့ပြဿနာအများစုက အလင်းရောင်လုံလုံလောက်လောက်မရှိတဲ့အတွက် ပုံပြတ်သားမှုမရှိတာ ၊ ရိုက်ချင်တဲ့ အဓိက subject ကို focus မလုပ်နိုင်တာ ၊ ပုံမပြတ်သားတဲ့အတွက် camera noice ထတာ တို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Night mode ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင်တော့ ဒီပြဿနာတွေက အသေးအမွှားလေးတွေပါ။
Night Mode ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မှိန်နေတဲ့အရောင်တွေက ပိုမိုထင်ရှားပြတ်သားလာမှာဖြစ်ပြီး ပြတ်သားလာတာနဲ့ အမျှ Focus လုပ်ဖို့ လွယ်ကူလာတာကြောင့် Night Shots တွေအတွက်ကတော့ စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူး ။ City views တွေ Scenery တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကျယ်ဝန်းတဲ့ views တွေကိုရိုက်နိုင်အောင် 8MP ultra-wide angle lens ကထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ညဘက်ဓါတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ Vivo ရဲ့V15pro ဖုန်းကကောင်းမွန်တဲ့ လက်တွဲဖော်တစ်ခုအဖြစ် ဈေးကွက်မှာနေရာယူထားနိုင်တာပါ။
ညဘကျဓါတျပုံရိုကျတဲ့အခါ Night Mode ကိုဘယျလိုအသုံးခမြလဲ ?
ညဘကျအလငျးရောငျလုံလုံလောကျလောကျမရနိုငျတဲ့ အခြိနျတှဆေို ထငျရှားပွတျသားတဲ့ ပုံတဈခုရဖို့ ဆိုတာ သိပျပွီး မလှယျကူလှပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ အခုခတျေ စမတျဖုနျးတှမှောတော့ Night Mode လို့ ချေါတဲ့ ညဘကျ အလငျးမှိနျတဲ့နရောတှမှောပါ သသေပျထငျရှားတဲ့ပုံမြိုးရအောငျ ထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ supportive mode တှပေါဝငျလာပါပွီ ။
အခုခတျေ စမတျဖုနျးစြေးကှကျမှာတော့ Vivo V Series products ထဲကတဈခုဖွဈတဲ့ Vivo V15 pro ဟာဆိုရငျ Triple Camera Setup နဲ့အတူ Night Mode ကွောငျ့ photography ၀ါသနာ ပါတဲ့သူတှကွေားမှာ ထိပျဆုံးက နရောယူထားပါတယျ။ အခွားဖုနျးကငျမရာတှနေဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ Dual camera အနနေဲ့ မဟုတျဘဲ 48MP+5MP+8MP ပါဝငျတဲ့ Triple Camera Setup ပါဝငျနခွေငျးက ဓါတျပုံရိုကျတဲ့အခါ သာမာနျထကျပိုမိုကယျြဝနျးတဲ့ရှုထောငျ့တှကေို ပေးနိုငျမှာဖွဈပွီး Night Mode နဲ့ ပေါငျးစပျလိုကျရငျတော့ ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ Night shots တှကေိုရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Camera Setup တှထေဲမှာ 48MP+5MP အပွငျ extra 8MP wide-lens ပါဝငျနမှေုက Panorama ဓါတျပုံတှရေိုကျတဲ့အခါမှာ အမြားကွီးအထောကျအကူပွုပါတယျ။ ခုခတျေဖုနျးတျောတျောမြားမြားမှာ Panorama mode ပါဝငျပမေဲ့လို့ wide-angle lens မပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ stable ဖွဈအောငျ camera ကိုမထိနျးနိုငျရငျ သသေပျတဲ့ပုံတဈခုရဖို့ ဆိုတာမလှယျကူနိုငျပါဘူး။
ညဘကျဓါတျပုံရိုကျတဲ့အခါ ကွုံတှေ့ ရတတျတဲ့ပွဿနာအမြားစုက အလငျးရောငျလုံလုံလောကျလောကျမရှိတဲ့အတှကျ ပုံပွတျသားမှုမရှိတာ ၊ ရိုကျခငျြတဲ့ အဓိက subject ကို focus မလုပျနျိုငျတာ ၊ ပုံမပွတျသားတဲ့အတှကျ camera noice ထတာ တို့ ဘဲဖွဈပါတယျ။ Night mode ကိုအသုံးပွုလျိုကျရငျတော့ ဒီပွဿနာတှကေ အသေးအမှားလေးတှပေါ။
Night Mode ဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ မှိနျနတေဲ့အရောငျတှကေ ပိုမိုထငျရှားပွတျသားလာမှာဖွဈပွီး ပွတျသားလာတာနဲ့ အမြှ Focus လုပျဖို့ လှယျကူလာတာကွောငျ့ Night Shots တှအေတှကျကတော့ စိတျပူစရာမရှိတော့ပါဘူး ။ City views တှေ Scenery တှရေိုကျတဲ့အခါမှာလညျး ကယျြဝနျးတဲ့ views တှကေိုရိုကျနိုငျအောငျ 8MP ultra-wide angle lens ကထောကျပံ့ပေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ ညဘကျဓါတျပုံရိုကျဝါသနာပါတဲ့သူတှေ အတှကျကတော့ Vivo ရဲ့V15pro ဖုနျးကကောငျးမှနျတဲ့ လကျတှဲဖျောတဈခုအဖွဈ စြေးကှကျမှာနရောယူထားနိုငျတာပါ။
Previous articleမမေတေို့ကို တခဏလေးတောငျမှ အနားမပေးနိုငျကွောငျး သကျသပွေုထားတဲ့ ဘဘေီတို့ရဲ့ ဓါတျပုံလေးတှေ
Next articleစနေ၊ တနငျြဂနှေ နှစရြကကြို ၆ပေါငလြောကြ လွော့ကစွမေဲ့ ၂ရကစြာ အစားအသောကြ